Ukupeyinta kunye neFactory yoKutyabeka-iChina yokuPeyinta kunye nokuTyala abavelisi, ababoneleli
I-Pigment Yellow 139 / CAS 36888-99-0
I-Pigment Yellow 139 ngumgubo obomvu obomvu we-pigment, kunye nozinzo olugqwesileyo ekusebenzeni, ukukhanya okuphezulu, ukumelana nobushushu kunye nokukhawuleza ukukhanya.
Kucetyiswa iipeyinti zamashishini, iipeyinti zomgubo.Kucetyiswe iicoil coil kunye neepeyinti zemoto.Nceda ujonge i-TDS yePigment Yellow 139 ngezantsi.
I-Pigment Yellow 138 / CAS 30125-47-4
I-Pigment Yellow 138 ngumgubo obomvu obomvu we-pigment, enozinzo olugqwesileyo lokucubungula, ukukhanya okuphezulu, ukumelana nobushushu kunye nokukhawuleza ukukhanya.
Icetyiswa kwiipeyinti zemizi-mveliso, iipeyinti ezisekwe emanzini, iipeyinti ezinyibilikisiweyo, iicoil coil, iingubo zomgubo, iipeyinti zemoto, ushicilelo olulukiweyo.
Nceda ujonge i-TDS yePigment Yellow 138 ngezantsi.